Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Aoka izay ny mpitsara tsy maty manota
Inty sy Nday : Aoka izay ny mpitsara tsy maty manota
Isan’ny rafitra ara-panjakana malaza amin’ny fisian’ny kolikoly ny fitsarana. Nahavelom-bolo ny fahenoana, indray mandeha, fa misy ny faribolan’ny mpitsara (cercle des magistrats) hijoro ho fitaratra (modely) ho amin’ny famongorana ny kolikoly eo anivon’ny fitsarana. Midika aloha izany fa tsy ny mpitsara rehetra no mpandray kolikoly. Io kolikoly io dia isan’ny fototra iray mampiova ny raharaha iray eo anivon’ny fiaraha-monina. Raha raharaham-pitsarana, ohatra , no asian-teny, noho ny kolikoky dia ny meloka indray no lasa mahazo rariny, ny mainty indray no lasa fotsy, ka mitarika ny tsy fitokisan’ny olom-pirenena ny fitsarana.
Etsy an-kilany, efa nahazo vahana loatra koa ny kolikoly ka raha ny raharaham-pitsarana ihany no asian-teny dia izay mpifanandrina amin’ny raharam-pitsarana iray ka tsy araka ny eritreriny ny vokatra na ny didy, dia ampangainy ho nisy kolikoly tao. Tena mahamenatra sy mahavaky fo.
Izay no isan’ny maha-goavana ny ezaka hamongorana ny kolikoly, ary ny minisitry ny Fitsarana, Imbiky Herilaza, moa, raha vao nandray ny asany amin’ny maha-minisitra azy izy, dia isan’ny fanamby nambarany ny hampanjaka ny Tany tan-dalàna. Ny dikan’izay, tafiditra ao ny ady amin’ny kolikoly.
Manipika izahay ery amin’ny lohateny hoe “aoka izay ny mpitsara tsy maty manota”. Lohalaharana amin’izany ny mpitsara mpandray kolikoly ho takalon’ny didim-pitsarana mety havoakany. Indraindray koa, aoka tsy ho diso fihevitra isika fa ny kolikoly koa dia tsy hoe mamadika ny rasa ihany, izany hoe manadio ny nahavanon-keloka, fa mety ho fanoitran’ny tsy hikirakirana ny antontan-taratasin’ady na tsy hitsarana mihitsy ny raharaha. Samy zava-doza eto amin’ny tany sy ny fanjakana izany. Mety hitranga izany finiavana tsy hikitika ny antontan-taratasin’ady eo anivon’ny fitsarana izany na amin’ny ady heloka na amin’ny ady madio. Ny fanantenana moa dia tsy maintsy misy raha mbola velon’aina ka isan’ny arahin’ny olona maro maso ary ametrahany fanantenana ny raharaham-pitsarana ao Toamasina ao.
Vantanina ny resaka fa tao Toamasina tao dia nisy mpitsara tena mpanao kolikoly. Soa fa efa nafindra toerana izy io. Miaraka mitsikombakomba aminy ny tompon’andraikitra sasany amin’ny fitandroana ny filaminana tao Toamasaina. Ny mpitandro ny filaminana moa no sehatra voalohany ivantanan’ny raharaham-pitsarana amin’ny ady heloka. Mpitandro ny filaminana no misahana ny famotorana amin’ny maha-polisy mpanao famotorana azy.
Io mpitsara mpanao kolikoly, mihevi-tena ho tsy maty manota tao Toamasina io, dia efa ampolony maro ny fitarainana avy amin’ny olom-pirenena momba azy io, ary ny Sekreteram-panjakana misahana ny zandarmariam-pirenena amin’izao fotoana, ny Jeneraly Géllé Serge, fony izy niasa tany Toamasina, dia nahasahy nitory an’io mpitsara mpanao kolikoly io. Ny raharahan-tany no tena maro lalaoviny sy ahazoany tombontsoa manokana an-jatony tapitrisa. Tsy izy ihany ny mpitsara tokony andraisana fepetra fa maromaro, ary ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara (Conseil superieur de la magistrature), dia mba iangaviana tsy hifampiaro rehefa misy ny fandikan-dalana vitan’ny mpitsara namana.